Luka Modric Oo Doonaya Inuu U Dhaqaaqo Manchester City Xagaaga Soo Aadan.
HomeWararka CiyaarahaLuka Modric oo doonaya inuu u dhaqaaqo Manchester City xagaaga soo aadan.
November 29, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Luka Modric ayaa lagu soo waramayaa inuu xiiseynayo ku biirista Manchester City haddii uu ka tago Real Madrid sanadka soo socda.
36-sano jirkaan ayaa weli fure u ah Los Blancos, isagoo saftay 13 kulan tartamada oo dhan, isagoo gacan ka geystay afar caawin, laakiin qandaraaskiisa Bernabeu ayaa dhacaya xagaaga soo aadan.
Real Madrid ayaa la rumeysan yahay inay dooneyso inay heshiis kordhin u sameyso xiddiga heerka caalami ee dalka Croatia, laakiin waxaa la fahamsan yahay in wadahadaladii labada dhinac ay joogsadeen.
Sida laga soo xigtay SuperDeporte , Modric ayaa ka fiirsanaya dookhyadiisa, iyadoo Newcastle United , Tottenham Hotspur iyo Man City ay ka mid yihiin kuwa xiiseynaya.
Warbixinta ayaa sheegeysa in ciyaaryahanka khadka dhexe uusan xiiseyneynin inuu u dhaqaaqo Newcastle ama uu dib ugu biiro Tottenham laakiin uu ka fiirsan doono u dhaqaaqista Man City si uu ula xiriiriyo Pep Guardiola .
Modric ayaa lagu xamanayaa inuu diyaar u yahay inuu sugo ilaa sanadka soo socda ka hor inta uusan go’aan ka gaarin mustaqbalkiisa, laakiin wuxuu ‘ka fiirsanayaa’ inuu u wareego Etihad Stadium ka hor ololaha 2022-23.